Ogaden News Agency (ONA) – AUGUST waa bishii ay Soomaalida Ogadenya diideeen inay Guumaystaha madaxa u foorariyaan!- By, Xaaji M/Rashiid
AUGUST waa bishii ay Soomaalida Ogadenya diideeen inay Guumaystaha madaxa u foorariyaan!- By, Xaaji M/Rashiid
Posted by Daljir	/ August 21, 2017
Sida lawada ogyahay waxaa hardan ka dhaxeeyaa guumaysiga iyo guumaysi diidaha haday ahaan lahayd taariikh hore, mid hadeer joogta ama mid soo socota. Arinkaasi dad gaar ah khaas kuma aha ee waa mid ka dhaxeeya inta damiirka leh ee dunida ku nool. Waxaa meesha u sarreysa kaga jira guumaysi diidnimada shacabka soomaalida ogadenya oo ah kuwa lagaga daydo hanwaynida iyo isdifaacidda. Way dhici kartaa in la helo dadyow guumaysiga ogolaaday, laakiin waxaa hubaal ah inay dabargo ku dambeeyaan aakiritaanka.
Shacabka somalida ogadenya ayaa ku soo jiray dagaal Qarnigii tagay ilaa Qarnigan waxaana cajiib ah in markay mawjadi shiiqdaba ay mid kale soo kacaysay, taasoo guumaystaha ku riday jaahwareer iyo quus. Karaamada iyo sharaftu waa qaali waxaana wanaagasan in haybad lagu noolaado ama lagu dhinto laakiin waxa udhaxeeya lama aqbali karo waana tan ay diiday umadda reer ogadenya ee geesiga ahi.
Waxaa la ogyahay in halgankii u dambeeyay ee ay hogaaminayeen dhalinyaradii WSLF uu ahaa mid si wayn u wiiqay itoobiya iyo ciidamadeedii, hase yeeshee waxay hoosta ka xarriiqeen wax garadkii halganku in siyaasad ahaan uu majaro habaabay!. Iyadoo laga faa’iidaysanayo dibna loo eegayo halgankii WSLF lagana fogaanayo waxyaabihii fashilka ku keenay halgankaas ayaa la aas aasay Jabahad cusub oo la yidhaaho ONLF. Ajendaha ama siyaasada ugu wayn ee ay jabhadaasi qaadatay ayaa ah in la helo hogaamin iyo siyaasad madax banaan oo halganku leeyahay taaoo ah mid ilaa maanta si joogta ah u socota.
1984 Bishii AUGUST dhexdeedii waxaa la dajiyay ajendayaashii laf dhabarta u ahaan lahaa halganka iyo mustaqbalkiisa, waxaana sidoo kale si hoose loo aas aasay magaca ONLF. Hadaana qaldanayn 10 sano kadib ayaa ciidan ahaan loo hirgaliyay jabhadda. Si kastaba ha ahaatee waxaa lagu jiraa maalmihii ugu farxadda badnaa halgamaaga uguna naxadin badnaa dhanka guumaystaha itoobiya maadaama ay saxaafaddu s iwayn u baahinayso Xafladaha iyo Khudbadaha sanadguurada 33 ee Ururwaynaha ONLF oo kasocda daafaha caalamka.
Hadaan isku soo wada duubo murtida waxaa insha Allaah xaqiiq ah inuu halganku guulaysan doono. Waxaa kale oo muhiim ah in halgamaagu meeshuu joogababa isku kalsoonaado isla markaana aan run loo qaadanin rafashada iyo probagaandaha beenta ah ee Taliska Itoobiya.